Vaovao - Ireo fitaovana mikraoba metaly dia manana fanoherana ny hafanana tsara sy fananana mekanika tena tsara
Ireo akora microporous metaly dia manana fanoherana ny hafanana tsara sy toetra mekanika tena tsara
Ireo akora microporous metaly dia manana fanoherana ny hafanana tsara sy toetra mekanika tena tsara. Amin'ny maripanan'ny efitrano, ny tanjaky ny metaly microporous metaly dia 10 heny noho ny akora vita amin'ny seramika, ary na dia 700 ℃ aza, ny tanjany dia mbola avo 4 heny noho ny an'ny fitaovana vita amin'ny seramika. Ny fahamendrehana tsara sy ny fitarihana hafanan'ny fitaovana microporous metaly dia mahatonga azy ireo hanana fanoherana hafanana tsara sy fanoherana ny seismika. Ho fanampin'izany, ny fitaovana microporous vy dia manana fikolokoloana sy fananana tsara ihany koa. Ireo fananana tena tsara ireo dia mahatonga ny fitaovana microporous metaly hanana fampiharana sy fahamboniana be lavitra noho ny fitaovana microporous hafa.
Amin'ny indostria maoderina dia be mpampiasa ny vokatra sy ny haitao Ultramicroporous vy. Manomboka amin'ny indostrian'ny fiambenana voalohany ka hatramin'ny indostrian'ny lamba matetika, fitaovana fanivanana ary indostrian'ny fanadiovan-drivotra, ary avy eo mankany amin'ny indostrian'ny chip teknolojia avo lenta, misy ny teknolojia ultra microporous metal.
Manana fitaovana fanodinana sy fitaovana fanandramana avy any Alemana, Suisse, Fanjakana Mitambatra, Etazonia, Italia, Japon ary firenena hafa isika. Manana rafitra mpanohana matanjaka ny famokarana vokatra, ny fitsapana ny vokatra ary ny fanodinana fitaovana manokana izahay, mifampiresaka amin'ireo mpiara-miasa iraisam-pirenena. Manana fahaiza-mivoatra matanjaka sy fampifanarahana tsena izahay.
Ny orinasa dia manana departemanta fikarohana sy fampandrosoana, izay afaka manome serivisy mahomby ho an'ny mpanjifa amin'ny fampandrosoana ny vokatra. Ho fanampin'izany, mifanaraka bebe kokoa amin'ny fanahin'ny fanavaozana mitohy izahay, ary miezaka hamokatra vokatra tsara kokoa, mba hamerenantsika ny fanohanan'ny mpanjifa. Amin'izao fotoana izao, ny fahaizan'ny famokarana isan-taona sy ny tena vokatra azo avy amin'ny vokatra spinneret an'ny orinasanay dia nahatratra lavaka mihoatra ny 30 tapitrisa, ary vokatra an'arivony maro no novolavolaina isan-taona, izay ampivoarana ireo vokatra vaovao an-jatony. Noho ny vokatra azo amidy sy ny lazan'ny tsena avo dia nahasarika orinasa fibre simika an-trano maro hiara-hiasa amin'ny orinasanay. Ny mpampiasa dia manana mpampiasa lehibe mihoatra ny 300 eo amin'ny tsena anatiny, ary ny anjaran'ny tsenan'ny vokatra dia mihoatra ny 50%. Ankoatr'izay, ny vokatra spinneret anay dia niditra tsikelikely tao amin'ny tsenan'i Taiwan, Korea atsimo, Japon, Azia atsimo atsinanana, Azia atsimo ary Eropa ary Amerika, ary nahazo laza tsara. Manana mpanjifa mihoatra ny 300 any amin'ny firenena mihoatra ny 40 izy, indrindra any India, izay mivoatra haingana ny indostrian'ny fibre simika, mitentina 60% ny tsena.
Fomba famokarana lamba tsy tenona, Pp famokarana lamba tsy tenona, Pp Disc sivana, Lamba tsy tenona, Fitaovana lamba tsy tenona, Pp Melt Blown Filter, Vokatra rehetra